Horudhac: Crystal Palace vs Manchester United… (Red Devils oo dib u heleysa xiddig muhiim ah) – Gool FM
Horudhac: Crystal Palace vs Manchester United… (Red Devils oo dib u heleysa xiddig muhiim ah)
Haaruun March 3, 2021
(London) 03 Mar 2021. Naadiga Crystal Palace ayaa caawa soo dhoweyn doonta kooxda Manchester United iyadoo aanan heysan xiddigeeda haldoorka ah ee Wilfred Zaha.
Kulankan ayaa ka tirsan horyaalka Ingiriiska, waxaana Man United oo maalmo gudahood booqaneysa London ay dooneysaa inay kusoo laabato waddada guulaha.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 11:15 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha:Andre Marriner (England)
Crystal Palace ayaa mar kale weyn doonta laacibkeeda Wilfred Zaha kaasoo dhaawac garoommada kaga maqnaa afartii kulan ee ugu dambeysay oo ay kooxdiisa ciyaartay, balse waxaa la filayaa inuu soo laabto kulanka Axadda ay kooxda Gorgorka booqaneyso naadiga Tottenham Hotspur.
Jeffrey Schlupp ayaa si wanaagsan usoo kabtay, waxaana la filayaa inuu ciyaartan qayb ka noqdo, si la mid ah waxay Palace dib u heleysaa Conor Wickham.
Edinson Cavani ayaa dhanka kale usoo laabanaya Manchester United kaddib markii dhaawac muruqa ah uu ku seegay saddexdii kulan ee la soo dhaafay.
Taas baddelkeed, waxaa kulankan dhaawac ku seegaya Paul Pogba, halka Phil Jones la filaayo inuusan dib dambe u ciyaarin fasalkan.
Crystal Palace ayaa guul la’aan ah 12 kulan oo xiriir ah oo ay horyaalka kula ciyaartay garoonkeeda kooxda Manchester United iyagoo guuldarro la kulmay sagaal jeer, saddex kalena barbarro heshay, waxaana guul ay garoonkan kaga gaarto Red Devils ugu dambeysay sanadkii 1991.
Manchester United ayaa guul ka gaartay Crystal Palace afartii kulan ee ugu dambeysay oo ay horyaalka ku booqatay garoonka Selhurst Park.
Si kastaba ha ahaatee, Palace ayaa raadineysa inay markii ugu horreysay Man United kaga adkaato labo jeer horyaalka hal xilli ciyaareed gudihiis.
Shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay labadan koox waxay guusha raaceysay kooxda martida ah, si gaar ah afartii kulan ee ugu dambeysay martida ayaa guul gaareysay.
Crystal Palace ayaa heysata 33 dhibcood waana rikoorkooda ugu wanaagsan horyaalka dhanka dhibcaha marka la ciyaaro 26 kulan tan iyo fasalkii 1991-92 xilligaas oo ay 26 kulan kaddib ay heshay 36 dhibcood.
Palace ayaa guul la’aan ah 19-kii kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxaha lixda sare ku jira, waxaana inay kooxaha sare garaacdo ugu dambeysay October 2017 oo ay Chelsea garaacday, muddadaas shan barbarro ayay heshay Eagles, 14 kalena iyada ayaa la garaacay.
Kooxda martida loo yahay caawa ayaa sameysay keliya min saddex darbo labadii kulan ee ugu dambeysay horyaalka oo ay la kala ciyaartay Brighton iyo Fulham, waxaana ay iyadu wajahday 40 darbo isku darka labadaas kulan.
Palace ayaa ku fashilantay inay gool dhaliso 17 ka mid ah 22-kii kulan ee ugu dambeysay horyaalka oo uusan ciyaarin wilfred Zaha, waxayna guul gaartay keliya saddex jeer, hal jeerna babarro ayay gashay, halka 18 kulan la garaacay marka uu ka maqan yahay Zaha.
Manchester United ayaa la kulantay kaliya hal guuldarro 20-kii kulan ee ugu dambeysay horyaalka.
Man United waa guuldarro la’aan dhammaan kulammadii horyaalka ee ay xilli ciyaareedkan kusoo ciyaartay bannaanka, sidoo kale wax guul darro ah ma aysan la kulmin 20-kii kulan ee ugu dambeysay bannaanka kusoo ciyaartay horyaalka iyadoo soo gaartay 13 guul, toddobada kalena barbarro gashay.
Red Devils ayaa dhalisay 31 gool qaybaha labaad ciyaarihii ay soo ciyaartay xilli ciyaareedkan, waana kooxda goolasha ugu badan dhalisay qaybta labaad ee ciyaaraha fasalkan.
Ole Gunnar Solskjaer kooxdiisa ayaa guuleysatay sagaal ka mid ah 11-kii kulan ee lasoo dhaafay horyaalka Premier League oo ay ciyaartay bartamaha toddobaadka, waxayna guul gaartay dhammaan lixdii kulan ee ay bannaanka kusoo ciyaartay bartamaha toddobaadka muddadaan.
Donny van de Beek ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay Man United safashadiisii ugu horreysay isagoo garoonka ku jiro 13 daqiiqo kulankii hore ee labadan koox, balse wax gool ah ma uusan dhalin markaas kaddib isagoo ciyaaray 1,045 daqiiqo dhammaan tartammada.
Man City oo garoonkeeda Etihad guul weyn kaga gaartay kooxda Wolverhampton… +SAWIRRO
Horudhac: Barcelona vs Sevilla... (Shaqo adag oo hor taalla Barca si ay ugu gudubto fiinaalka Copa del Rey)